Isicelo sika”16V” kubadlali beBafana | Ilanga News
Home Ezemidlalo Isicelo sika”16V” kubadlali beBafana
Isicelo sika”16V” kubadlali beBafana
Ukhathazwa wukwehlelwa yisithunzi kwaleli qembu alisebenzela kanzima
UNXUSA abadlali bakuleli ukuba babuyise udumo lweBafana Bafana uDoctor “16V” Khumalo owayengumdlali ongaconsi kwiKaizer Chiefs eminyakeni edlule.
UDoctor ubekhuluma naleli phephandaba ngoMgqibelo ngesikhathi ehambele umcimbi wokuvulwa kwendawo yobumnandi oLundi, eyaziwa ngokuthi iDa Chillerz.
UDoctor wayeyisithandwa sabalandeli beBafana njengoba ayephasa amabhola axoxa indaba kubagadli balesi sikwati sinqoba i-Africa Cup of Nations (Afcon) ngo-1996 nangesikhathi singena emidlalweni yeNdebe yoMhlaba eyayiseFrance ngo-1998.
Ephawula ngokwehlelwa yisithunzi ngendlela exakile kweBafana uDoctor, uthe: “Sekuyisi-khathi sokuba abadlali bakuleli baphakamise amasokisi eqenjini lesizwe.
“Umdlali nomdlali kumele enze umsebenzi wakhe manje. Kufanele bakhombise uthando kuqala ngaphambi kokuba bazinikele.
“Ngiyazi ukuthi abanye ngeke bakuzwisise kahle engikushoyo, kodwa bayalazi iqiniso. Sinalo lonke uhlobo lwabadlali kuleli inkinga yabo wukuthi kabenzi izinto ngendlela. Thina sikhule sibukela abadlali abebevelele kubalwa uMatsilele ‘Jomo’ Sono noNelson ‘Teenage’ Dladla.
“Lokho nje kukodwa kwakusenza silangazelele ukufinyelela ezingeni labo. Laba esinabo manje bangahamba ibanga elide yinqobo nje uma bengathatha umthwalo weqembu bawuphose emahlombe abo. Uma nje kungaqala umdlali oyedwa abakhombise ukuthi yini okumele yenziwe kukude lapho leli qembu elingavinjwa khona.
“Uma ubheka indlela abalandeli abagqoza ngayo ezinkundleni, ikhombisa ngokusobala ukuthi inkulu inkinga ebholeni lakuleli.
“Indlela okudlalwa ngayo nayo inomthelela omkhulu ekutheni abalandeli bangalubhadi ezinkundleni.
“Abathandi bebhola bafuna ibhola elihehayo. Ukungathokozi uma beya ezinkundleni kunomthe-lela omkhulu ekutheni izinkundla zihlale zingenabantu.”
Mayelana nokungenzi kahle kwabadlali bakuleli phesheya kwezilwandle uDoctor, uthe: “Uma uyodlala phesheya kwezilwandle kumele inhloso yakho kube wukuyozakhela igama emhlabeni. Lokho kudinga ukuba umdlali azinikele, abhekane nomsebenzi wakhe.
“Konke kuqala umdlali esemncane ukuze akhule esenolwazi lokuthi ubhekana kanjani nezimo ezahlukene. Uma ubheka amazwe afana noBrazil, abadlali bakhona bakhuliswa besebancane baqale banakekelwe okwenza kungabi nzima ukuhamba ibanga elide kulo mdlalo.”
UDoctor ukhuluma into ayaziyo ngokujatshuliswa kwezihlwele kwazise namanje akekho osafika kuyena ngekhono lokukhulumisa ibhola enkundleni kubadlali bakuleli.
Lo mdlali wavunywa ngisho nanguMario Zagallo owayecija iBrazil ngokuba nekhono eliyisimanga lokudlala ibhola ngesikhathi iBafana iguqiswa yileliya lizwe ngo-3-2 ngo-1996.
IBrazil yavuka indlobane emuva kokuba kukhishwe uDoctor kulo mdlalo. Leli yiphutha namanje uClive “The Dog” Barker owangu-mqeqeshi weBafana ngaleso sikhathi, alivumayo ukuthi wale-nza ekhipha umdlali owayemthwa-lele umdlalo.
Kulo mdlalo uDoctor wakhi-shwa iBafana ihamba phambili ngo-2-0. Wakha igoli lokuqala elangqofelwa enethini nguPhilemon “Chippa” Masinga waphinda waqobela elesibili okwenza kwayiwa ekhefini kungu-2-0.
UDoctor uphinde wafisela okuhle iqembu lesizwe lakuleli lika-U/23 elisanda kuzibekisela indawo kuma-Olympic Games azokuba ngonyaka ozayo eTokyo, eJapan. Uthi leli qembu lenze umsebenzi omkhulu futhi akangabazi ukuthi lizokwenza kahle kulo mqhudelwano omkhulukazi emhlabeni. Uphinde wancoma nome-ngameli weSundowns, uPatrice Motsepe ngokuvuma ukudedela umqeqeshi wezakhe, uDavid Notoane ukuba ahole leli qembu lakuleli lika-U/23. Uthi uyamethe-mba lo mqeqeshi ukuthi uzolipha-kamisa ifulegi lakuleli kulo mqhudelwano.
Previous articleWina amaSelula ne Airtime ka R150
Next articleIGcokama lidide abaningi ngemiyeko kwi-albhamu